Guardrail Post mpanamboatra & mpamatsy - China Guardrail Post Factory
Lahatsoratra miendrika U
Lahatsoratra miendrika C
W andry fiambenana
Ity lahatsoratra ity dia ny manaraka ny fenitra AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 ary ny EN1317. Ny fitaovana ampiasaina amin'izany dia ny Q235B (S235Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 235Mpa) ary ny Q345B (S355Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 345Mpa). Ho an'ny hatevin'ny tranofiara amin'ny alalàn'ny 4.0mm ka hatramin'ny 7.0mm na araho ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny fitsaboana ambony dia atsoboka ao anaty ala mafana, hanarahana ny AASHTO M232 sy ny fenitra mitovy amin'ny AASHTO M111, EN1461 sns.
Lahatsoratra miendrika H
Ity lahatsoratra ity dia ny manaraka ny fenitra AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 ary ny EN1317. Ny fitaovana ampiasaina amin'izany dia ny Q235B (S235Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 235Mpa) ary ny Q345B (S355Jr ny tanjaky ny vokatra dia mihoatra ny 345Mpa). Ho an'ny hatevin'ny tranofiara amin'ny alalàn'ny 4.0mm ka hatramin'ny 7.0mm na araho ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny fitsaboana ambony dia atsoboka ao anaty ala mafana, hanarahana ny AASHTO M232 sy ny fenitra mitovy amin'izany AASHTO M111, EN1461 sns ...